Global Aawaj | तीन हजार वर्षअघि किन घट्यो मानव मस्तिष्कको आकार ? तीन हजार वर्षअघि किन घट्यो मानव मस्तिष्कको आकार ?
तीन हजार वर्षअघि किन घट्यो मानव मस्तिष्कको आकार ?
९ कार्तिक २०७८ 8:22 am
काठमाण्डौं । मस्तिष्क मानव शरीरको सबैभन्दा जटिल अंग हो। मानव मस्तिष्कको विकासबारे एक पछिल्लो अध्ययनले करिब-करिब मिल्दोजुल्दो तथ्य उजागर गरेको छ। करिब तीन हजार वर्षअघि मानव मस्तिष्कको आकार घटेको अध्ययनले देखाएको छ। मस्तिष्कको आकार किन बढ्ने वा घट्ने हुन्छ भन्ने तथ्य चित्रण गर्न कमिलालाई नमुनाका रूपमा अध्ययन गरिएको थियो। मानव समाजमा मस्तिष्क संकुचन सामूहिक बुद्धिको विस्तारसँग समानान्तर हुन्छ।
‘हामी यो प्रस्ताव गर्छौं कि यो मस्तिष्कको आकार घटुवा सामूहिक बौद्धिकता बढेपछि भएको हो। समूहको एउटा मानिस मात्र स्मार्ट हुनुभन्दा समूहका सबै मानिस नै स्मार्ट बन्नुपर्छ भन्ने जुन विचार छ, जसलाई हामी ‘भीडको विवेक’ भनेर चिन्छौँ’, ट्रानिइलोले भने। थप डाटा उपलब्ध भएकाले हाइपोथेसिस परीक्षण गर्न लागिएको डेसिल्भाको भनाइ छ।